हात्तीको नाममा अख्तरले राखे ६ करोडको सम्पत्ती ! - Sagarmatha Online News Portal
हात्तीको नाममा अख्तरले राखे ६ करोडको सम्पत्ती !
काठमाडौं । भारतको केरलामा गर्भीणी हात्ती विनायकीको हत्या भएपछि हात्तीामाथिको बर्बरताको आलोचना भयो ।
कटहरमा बिष्फोटक पर्दाथ भरेर गर्भीणी हात्तीलाई खुवाएपछि यसले मानिसमा पशुप्रतिको प्रेम मरेको आंकलन गरियो । तर भारतकै एक ब्यक्तिले मानिसमा अझै पनि पशु प्रतिको प्रेम नमरेको उदाहरण पेश गरेका छन् ।
भारतको बिहार निवासी एक व्यक्तिले हात्तीप्रति प्रेमको अहिले सर्वत्र चर्चा छ । उनमा हात्ती प्रतिको प्रेम यति धेरै थियो कि, आफ्नो सबै सम्पती दुई हात्तीको नाममा लेखिदिए । बिहारको जानीपुर निवासी एरावत संस्थाका मुख्य प्रबन्धक ५० बर्षीय अख्तर इमामले आफ्ना दुई हात्ती मोती र रानीका नाममा आफ्नो सम्पुर्ण सम्पति लेखिदिएका छन् ।
अख्तरका अनुसार उनको ज्यानमार्ने उदेश्यले आक्रमण भएको बेला यिनै हात्तीले उनलाई बचाएका थिए । अख्तरका अनुसार हातमा पेस्तोल बोकी आफु तर्फ आएका आक्रमणकारीबाट बचाउन उनका हात्तीले कराएर आफुलाई सचेत गरेका थिए । जसका कारण उनको ज्यान बचेको थियो ।
अख्तरका अनुसार आफ्नै छोराले समेत आफ्नी प्रेमिकासँग दृष्कर्मको आरोपमा उनलाई जेल पुर्याएका थिए । तर उनी निर्दाेष साबित भएर छुटे । अख्तर आफ्ना छोरा मेराजले पशु तस्करसँग मिलेर आफ्ना दुई हात्ती बेच्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।
उनी १० वर्षयता श्रीमती र परिवारका अन्य सदस्यबाट एक्लै छन् । त्यसैले उनले आफ्नो सबै सम्पती दुई हात्तीको नाममा लेखिदिएकाहुन् । यदि यी दुबै हात्ती जीवित रहेनन् भने पनि उनका परिवारका कुनै सदस्यले केहि पाउने छैनन् । तर अख्तरले सबै सम्पती हात्तीको नाममा लेखिदिएपछि उनका आफन्तजन विरोधमा उत्रिएका छन् ।
एरावत संस्थाका प्रमुख अख्तरका अनुसार १२ बर्षको उमेरबाटै हात्तीको सेवामा जुटेका उनी पारिवारिक कलहका कारण श्रीमती, २ छोरा र छोरीबाट एक्लै अलग्गै रहदै आएका छन् । उनले आफुलाई झुटो आरोपमा फसाउने जेठो छोरा मेराज उर्फ रिन्कुलाई आफ्नो सम्पतीबाट वञ्चित गरेका छन् ।
उनले अशंवडाका क्रममा सम्पतीको आधा भाग श्रीमती र आधा आफुलाई राखेर आफ्नो भागको करीब ६ करोड भारुको सम्पती आफ्ना दुई हात्तीका नाममा गरेका हुन् । यदि यी हात्तीको मृत्यु भएमा पनि सबै सम्पती एरावत संस्थामा जानेछ ।